Archive du 20180824
Hetsika goavana eny Mahamasina Efa santatry ny fandresena
Mbola nanome toky ny vahoaka malagasy rehetra omaly ny avy eo anivon’ny antoko Tiako i Madagasikara fa tsy misy atahorana ny famoriam-bahoaka izay hataon’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, etsy Mahamasina, rahampitso sabotsy.
Jeune TIM « Efa niomana hatramin’ny 2009 izahay. »
Nilaza ny fahavitrihan’izy ireo ho avy etsy Mahamasina rahampitso sabotsy hanotrona ny fihaonan’ny kandida Ravalomanana amin’ny vahoakan’Antananarivo ihany koa ry
Fifidianana filoham-pirenana Miroso amin`ny dingana hafa ny CENI
Tapitra ny anjaran`ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ka any amin`ny CENI na vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana indray izao ny baolina, hoy ny fitenenana.
Omer Beriziky “Nirotsaka aho hitondra fanovana…”
Miteraka resabe ny isan’ny kandida filoha izay 36, ary mbola misy ny kandida miahiahy manoloana ny lalàm-pifidianana sy lesoka samihafa. Zon’ny tsirairay ny mirotsaka hofidiana Filoham-pirenena rehefa mahafeno ny fepetra takiana rehetra,
Fampielezan-kevitra Hafotaka dia hafotaka
Azo antoka izany fa tsy ho latsaky ny 10 ireo kandida hanaparitaka vola na koa vinavinaina ho be vola indrindra amin’ity fifidianana manakaiky ity.
Rivo Rakotovao Efa tena maika ho filoham-pirenena
Ny lalàna no mametra ny hisolotena ny filoha raha hirotsaka hofidiana izy, ary efa miomana amin’izay ny fitondram-panjakana satria tsy azo havela amin’izao ny firenena fa handeha ny fifidianana, hoy i Rivo Rakotovao.
Marc Ravalomanana Tiam-bahoaka na henjehina aza
Ao anatin’ny fifidianana isika amin’izao fotoana izao na tsy fotoanan’ny fampilezan-kevitra aza.
Tandremo sao mijabaka
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tsy dia misy hafatra marobe manao ahoana tiako ambara aminao aloha raha ny anio fa mba te hampitandrina fotsiny aho hoe ndrao voafandrika ka vaky andrina ee !
Hery ana habakabaka Nahazo fampitaovana manaraka ny toetr’andro
Mankalaza ny faha-57 taona niorenany ny hery ana habakabaka amin’ity taona 2018 ity. Amin’izany indrindra ny nanokanana ny lohahevitra hoe “ny fampivoarana ny hery ana habakabaka fanamby iray ho fampandrosoana an’i Madagasikara”.
Fiatrehana ny loza voajanahary Nampitomboina ny ivon-tseraseran’ny BNGRC
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy Fort Duchesne ny ivontoeran-tserasera hiatrehana ny loza sy ny tandindon-doza eto Madagasikara.
Faha-10 taonan’ny FTMRAT Natomboka tamin’ny fiaraha-nisakafo
Feno 10 taona ankehitriny ny nitsanganan’ny FTMRAT “Fikambanan’ny Tanora Mpanao Rugby eny Ambany tanàna” tarihan’i Naina Be « Rakotondrafara Jean Heriniaina ».
Rugby Amboaran’ny Ben’ny tanàna 2018 Milamina ny fanatontosana ny famaranana amin’ny alahady izao
Nambaran’ny talen’ny kolontsaina sy ny fiainam-pirahamonina eo anivon’ny CUA “Kaominina Antananarivo Renivohitra”, Andriamisa Raminohe Patrick,
Telma Coupe de Madagascar 2018 eto Analamanga Nafindra etsy Mahamasina anio zoma ireo lalao roa
Raha efa nofaritan’ny FMF « Federasion’ny Baolina Kitra Malagasy » tamin’ny antsapaka natao teny Andraharo tamin’ny alatsinainy 20 aogositra teo fa
Famisavisana ny ratsy !
Mazava io ny isan’ny kandida hirotsaka ho filoham-pirenena, ary andrasana indray ny antsapaka momba ny filaharan’ny kandida ao anaty bileta tokana. Raha ny habetsany aloha,
Mpitatitra sy mpiaro ny zon’ny mpanjifa Nitambatra ary handray fanapahan-kevitra
Omaly alakamisy no nanao fanambarana niraisana tetsy Ambodivona ireo fikambanan’ny koperativan’ny fitaterana mivondrona ao amin’ny zotra an-drenivohitra sy ny manodidina (UCTU, UCTS) sy ny mpampanofa fiara ary ireo mpiaro ny zon’ny mpanjifa MCI sy RNDC.
Havizanana tafahoatra 5 isan-kerinandro ireo marary manatona tobim-pitsaboana
Mihabetsaka ireo olona lasibatry ny havizanana tafahoatra amin’izao ( fatigue generale).
Sekoly ambony momba ny varotra sy ny fifaninanana Mpandraharaha matihanina amin’ny fanondranana no tanjona
Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria Antaninarenina ny mpianatra andiany faha-10 tao amin’ny sekoly ambonin’ny varotra sy ny fifaninanana (INCC).
Fanomanana ny fidiran’ny mpianatra Velon-taraina sahady ny ray aman-dreny
Efa miomana sahady amin’ny fidiran’ny mpianatra taom-pianarana 2018-2019 ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny ankehitriny.
Laza adina bakalorea Tsy misy atahorana fa voaaro tsara
Telo andro anio zoma no natoka-monina ireo mpampianatra nandrafitra ny laza adina Bakalôrea ankapobeny sy teknika izay hotontosaina eto amintsika manomboka ny 17 septambra ho avy izao.
TSY AO ANATY LISITRA AKORY
Maro amin’ny mpifidy no tsy nijery akory ny anarany tao anaty lisi-pifidianana izay efa ela no nikatona.
Volena fifaninanana mba hisian`ny kalitaon`ny vokatra Sarobidy loatra ny tanora ary tokony omena sehatra ahafahany mivoatra(Asa), ary manamafy ny fahaizany sy ny traikefa.